Mgbe ị kwadoro oge nke atọ nke ndị ọbịa, nke atọ nke Narcos ga-amalite | Akụkọ akụrụngwa
Ndị ọrụ Netflix anaghị ebi naanị na Marvel na franchises ya. Companylọ ọrụ ahụ maara na obere obere ọ ga-aga ịgbasa katalọgụ ndị a na-enye ndị niile debanyere aha ya, na ọ bụ ezie na ọ na-aga n'ihu ịkụ nzọ na Marvel, ọ naghị echefu ụdị ngwaahịa ndị ọzọ. Ihe ndi ozo bu ihe Netflix kpughere na afo gara aga. Narcos abụwokwa otu n'ime nnukwu nsogbu Netflix na afọ ndị na-adịbeghị anya, dị ka House of Cards, oroma bụ Black ọhụrụ, mgbe niile na-ese okwu Black Mirror na usoro nke ụmụnne Wachowski (ndị okike nke Matrix) Sense 8 site na mkpakọrịta kacha mkpa. .
N'ajụjụ ọnụ ha nyere akwụkwọ Vork, ụmụnne Duffers kwadoro na ndị ọbịa ga-enwe oge nke atọ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke anọ. O doro anya na ha nile dabere n'otú ma oge nke abụọ na nke atọ si etolite. Oge nke anọ a ga-abụ nke ikpeazụ, ma ọ dịkarịa ala na mbido, ebe ọ bụ na mgbe ngwaahịa na-arụ ọrụ, ndị na-emepụta ihe na-abụkarị ịkụ nzọ n'ịnyịnya mmeri ma ghara itinye ihe egwu ọhụrụ. Iji nwee ike ịnụ ụtọ oge nke abụọ anyị ga-echere ruo Ọktọba 27, mana ka anyị nwere ike ịmalite mepee ọnụ anyị na ụgbọala na-adọkpụ.
Ihe ọzọ Netflix mere nke ọma na nso nso a bụ Narcos agaghị ewe ogologo oge iji nweta katalọgụ nke Netflix ka ọ ga - eme nke a na Septemba 3. Na nke atọ a, na-enweghị Pablo Escobar, Netflix ga-anwa ijigide ihe ịga nke ọma ọ rụpụtara n'usoro isiokwu a, na-elekwasị anya na cali cartel na Medellín na otu Mbelata dị ukwuu na lita ọbara nke na-apụta na nke ọ bụla. Ọ dị mma na ha ga-eme ya iji nweta ya. N'elu ahịrị ndị a, anyị nwere ike ịchọta ọhụụ na - adọkpụ ọhụrụ nke Netflix ezigoro iji kwupụta oge nke atọ nke usoro a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » gụgharia » Mgbe oge nke atọ nke ndị ala ọzọ na-akwadoro, nke atọ nke Narcos ga-amalite
Nke a bụ ihe mbụ 8th Intel Intel processors dị ka ya